“N’EBE NILE Ọ BỤLA KA ANYA ABỤỌ NKE JEHOVA DỊ, NA-ECHE NDỊ ỌJỌỌ NA NDỊ BỤ́ EZI MMADỤ NCHE.”—Ilu 15:3.
Ọ BỤ nanị mmadụ ole na ole ga-enwe ahụ́ iru ala banyere echiche nke mmadụ ọzọ inyocha ihe ọ bụla ha na-eme, na-enyocha ihe ndị ha bu n’uche, na-enyochapụta ọchịchọ dị n’ala ala obi ha. Ka o sina dị, nke a bụ kpọmkwem ihe Bible na-ekwu na Chineke pụrụ ime. Ná Ndị Hibru 4:13, Bible na-ekwu, sị: “Ọ dịghịkwa ihe e kere eke nke na-apụtaghị ìhè n’anya ya, ma ihe nile gba ọtọ ma bụrụ ndị e kpughepụrụ ekpughepụ n’anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ.” Nke a ọ́ bụghị inyoba anya n’ihe dịịrị onye ọzọ? Ọ dịghị ma ọlị. N’ihi gịnị ka o ji dị otú ahụ?
Iji maa atụ: Ka ị na-egwu mmiri n’ụsọ osimiri, onye na-agụpụta ndị mmiri na-eri pụrụ ịnọgide na-eledo gị anya. Ị dịghị ele nke a anya dị ka inyoba anya n’ihe dịịrị onye ọzọ. N’eziokwu, ọnụnọ ọ nọ ya na-eme ka i nwee mmetụta nke ịnọ ná nchebe. Ị na-amara na ọ bụrụ na ị baa ná nsogbu, ọ ga-agbatara gị ọsọ enyemaka ngwa ngwa. N’otu aka ahụ, nne na-eledo nwa ya anya mgbe nile. Ọ bụrụ na o meghị otú ahụ, a pụrụ ile ya anya dị ka onye na-eleghara ihe anya.
N’ụzọ yiri nke ahụ, Jehova Chineke na-enyocha echiche na omume anyị n’ihi na o bu ọdịmma anyị kasịnụ n’obi. Otu onye amụma a kpọtụrụ aha na Bible kwuru, sị: “Jehova, anya Ya na-ejegharị n’ụwa nile, igosi Onwe ya onye dị ike n’akụkụ ndị obi ha zuru okè n’ebe Ọ nọ.” (2 Ihe E Mere 16:9) Ma ókè hà aṅaa nke echiche na omume anyị na-eme mgbe nanị anyị nọ ka Jehova na-ahụ n’ezie? Ihe omume ụfọdụ metụtara Jizọs, bụ́ Ọkpara Chineke, na-enye ihe ọmụma ụfọdụ.
Ikike nke Ịma Ihe E Bu n’Uche
Mgbe Jizọs nọ na-eri nri n’ụlọ otu onye Farisii, otu nwanyị a maara dị ka onye mmehie bịara ma gbusa ikpere n’ala n’akụkụ ụkwụ Jizọs. Ọ malitere ibe ákwá ma jiri ntutu ya hichapụ anya mmiri ya tasasịrị n’ụkwụ Jizọs. Akụkọ ahụ na-ekwu, sị: “Mgbe ọ hụrụ nke a, onye Farisii ahụ kpọrọ ya òkù kwuru n’ime onwe ya, sị: ‘Nwoke a, a sị na ọ bụ onye amụma, gaara ama onye na-ebitụ ya aka.’” Nzaghachi Jizọs na-egosi na ọ bụghị nanị na ọ maara ọnọdụ nwanyị ahụ, kamakwa, ọ maara ihe onye Farisii ahụ ka kwusịrị nnọọ “n’ime onwe ya.”—Luk 7:36-50.
N’oge ọzọ, otu ìgwè ndị na-akwadoghị ọrụ ebube Jizọs na-arụ bịakwutere ya. Akụkọ ahụ e dekọrọ na Matiu 9:4 na-ekwu, sị: “Jizọs, ebe ọ maara ihe ha na-eche, sịrị: “Gịnị mere unu ji eche ihe dị njọ n’obi unu?’” Ikike Jizọs nwere ịmara ihe ndị ọzọ bu n’uche karịrị nnọọ ịkọ nkọ e ji ọgụgụ isi mee.
Ịtụgharị uche n’ihe ndekọ mbilite n’ọnwụ Lazarọs na-ekpughe na ọ gụnyere ihe dị nnọọ ukwuu. Ezigbo enyi Jizọs bụ́ Lazarọs anwụwo kemgbe ụbọchị anọ. Echiche ya alawo n’iyi, ọ malitewokwa ire ure. (Abụ Ọma 146:3, 4) Mgbe Jizọs nyere ntụziaka ka e meghee ụzọ e si abanye n’ili Lazarọs, nwanne nwanyị Lazarọs bụ́ Mata akwadoghị nke ahụ: “Onyenwe anyị, ka ọ dị ugbu a ọ ghaghị ịbụ na o siwela ísì.” N’agbanyeghị nke ahụ, site n’ike Chineke, Jizọs kpọlitere Lazarọs n’ọnwụ, gụnyere ikike ncheta ya nile bụ́ nke dị mkpa iji mee ka Lazarọs bụrụ onye ọ bụ na mbụ.—Jọn 11:38-44; 12:1, 2.
Ihe Jizọs kwuru banyere ekpere na-egosi na Jehova Chineke nwere ikike nke ịmara ihe dị n’ala ala obi anyị. Tupu ọ kụziere ndị na-eso ụzọ ya ekpere ihe atụ ahụ, Jizọs kwuru, sị: “Chineke bụ́ Nna unu maara ihe ndị na-akpa unu tupurị unu arịọ ya.” Jizọs kwukwara, sị: “Mgbe ị na-ekpe ekpere, banye n’ọnụ ụlọ nke aka gị, mgbe i mechisịkwara ọnụ ụzọ gị, kpegara Nna gị nke nọ na nzuzo ekpere; Nna gị bụ́ onye na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụghachi gị.”—Matiu 6:6, 8.
Abamuru nke Ịmara na Chineke Na-ele Anyị
Ịmara na Chineke na-enyocha obi nile ma na-aghọta “nchepụta nile ọ bụla nke echiche” ọ̀ na-eme ka anyị gharazie imegharị ahụ́ ma ọ bụ na-ebelata nnwere onwe anyị? (1 Ihe E Mere 28:9) N’ụzọ megidere nke ahụ, ịmara na ọ dịghị ihe ọ bụla a pụrụ izo ezo n’anya Chineke pụrụ ịkwali anyị ime ihe ndị ziri ezi.
Elizabeth, bụ́ onye a kpọtụrụ aha n’isiokwu mbụ, na-ekwu na isi ihe mere ya ji na-akwụwa aka ọtọ abụghị n’ihi na a na-eji kamera ndị e ji eledo mmadụ enyo ya n’ebe ọrụ. Kama nke ahụ, ọ na-ekwu, sị: “Eziokwu ahụ bụ́ na m maara na Jehova na-ahụ ihe m na-eme, na-akpali m ịdị na-akwụwa aka ọtọ n’ihe nile m na-eme, ọbụna mgbe m na-anọghị n’ọrụ.”
Jim kwuru ihe yiri nke ahụ. Ọ na-arụ ọrụ n’otu ụlọ mmepụta ihe bụ́ ebe a na-enwekarị nsogbu nke ndị ọrụ izuru ihe na ya. Otú ọ dị, Jim jụrụ izu onye were ya n’ọrụ ohi. Ọ na-ekwu, sị: “Ọ bụ eziokwu na m pụrụ ịlanahụ ya ma ọ bụrụ na mụ ezuo ohi n’ụlọ ọrụ m, ma eji m mmekọrịta mụ na Chineke kpọrọ ihe, na-amarakwa na ọ na-ahụ ihe nile m na-eme.”
Ịmara na Chineke maara ihe nile anyị na-eme, tinyere ọchịchọ nke iso ya na-enwe ezi mmekọrịta, pụrụ ịkpali mmadụ ime mgbanwe dị ukwuu ná ndụ ya. Dị ka ihe atụ, a zụlitere Doug n’ezinụlọ Ndị Kraịst, ma o jighị eziokwu ahụ bụ́ na Chineke pụrụ n’ezie ịhụ ihe ndị ọ na-eme kpọrọ ihe. N’ihi ya, o biri ụdị ndụ abụọ. O so ndị ezinụlọ ya na-aga nzukọ Ndị Kraịst ma nke ahụ gasịa, ò soro ndị enyi ya jiri ọgwụ ọjọọ na-eme ihe. Mmasị o nwere n’ebe ọgba tum tum dị dugara ya n’isonyere otu òtù ndị ọgba tum tum a maara dị ka ndị na-eme ihe ike. Iji bụrụ onye ha nabatara, Doug mere mpụ ndị dị oké njọ.
Mgbe afọ ụfọdụ gasịrị, Doug maliteghachiri ịmụ Bible. Ọ malitere ịhụ Jehova dị ka onye dị adị n’ezie nke maara banyere omume ndị mmadụ ma bụrụ onye ọ na-emetụta. A kpaliri Doug ịmalite ibi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’ụkpụrụ ndị dị elu nke Chineke. N’agbanyeghị na òtù ahụ na-etikarị onye ọ bụla nke hapụrụ òtù ahụ ihe nke ukwuu, Doug gara nzukọ òtù ahụ ma gwa ha n’ihu ha nile na ya esoghịzi n’òtù ha. Ọ na-echeta, sị: “Mgbe m biliri ọtọ ikwu okwu, obi nọ na-akụ m kpum kpum. Ọ bịara dị m ka ebe Daniel nọ n’olulu ọdụm. Ma ekpegaara m Jehova ekpere n’ime obi m ma jirizie obi umeala kọwaara ha ihe mere m ji ahapụ ha. Mgbe m si n’ebe ahụ pụọ, ha nile, e wezụga otu onye, kwere m n’aka ma sị m ya gazie. Ahụrụ m eziokwu dị n’Aịsaịa 41:13: ‘Mụ onwe m, Jehova, Chineke gị, na-ejidesi aka nri gị ike, bụ́ Onye na-asị gị, Atụla egwu, Mụ onwe m [ga-enyere] gị aka.’” Ọ dị Doug ka Jehova ò nyere ya ume dị ya mkpa iji gbanwee ndụ ya.
Echiche Ezi Uche Dị na Ya
Ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya iche na anyị pụrụ izoro Chineke ihe ezoro. Bible na-ekwu hoo haa, sị: “Onye nzuzu asịwo n’obi ya, Ọ dịghị Chineke ọ bụla dị.” (Abụ Ọma 14:1) Dị ka isiokwu ndị bu ụzọ mere ka ọ pụta ìhè, ụmụ mmadụ emepụtawo kamera ndị a na-eji eledo mmadụ bụ́ ndị nwere ike ịmata otu ihu kpọmkwem n’etiti ìgwè mmadụ. Ha emepụtawo ígwè ọrụ ndị na-egeta ihe ndị mmadụ na-ekwurịta, bụ́ nke pụrụ iwepụta otu ụda olu kpọmkwem n’etiti ọtụtụ puku ụda olu ndị na-akpọ telifon. Otú ọ dị, n’ezie, Onye Okike nke ụbụrụ mmadụ nwere ikike nke inyocha echiche nke mmadụ ọ bụla, mgbe ọ bụla O chere na o kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ ezie na Onye Okike anyị nwere ikike nke ịmara ihe nile mmadụ na-eme mgbe ọ nọ nanị ya, ụmụ mmadụ enweghị ikike dị otú ahụ. Pita onyeozi na-adụ ndị nile nwere mmasị inweta ihu ọma Chineke ọdụ, sị: “Ka onye ọ bụla n’ime unu ghara ịta ahụhụ dị ka . . . onye ajọ omume ma ọ bụ dị ka onye na-enyonye anya n’ihe ndị gbasara ndị ọzọ.” (1 Pita 4:15) Pọl onyeozi na-adọkwa aka ná ntị megide itinye ọnụ “n’ihe ndị gbasara ndị ọzọ.”—1 Timoti 5:13.
Ihe atụ nke ‘inyonye anya’ na itinye ọnụ “n’ihe ndị gbasara ndị ọzọ” n’ụzọ gabigara ókè bụ omume na-akawanye njọ ná mba ụfọdụ bụ́ nke ndị nkịtị iji teepu ma ọ bụ vidio ndị pere mpe nke ukwuu na-ege ihe ndị ọzọ na-ekwu ma ọ bụ na-enyo ha. Dị ka ihe atụ, na Japan, onye na-agba ọsọ marathon bụ́ Naoko Takahashi, bụ́ onye ritere ọlaedo n’Egwuregwu Olympic e nwere na Sydney, chọpụtara na nso nso a na e zoro otu kamera pere ezigbo mpe n’ọnụ ụlọ ịsa ahụ́ ya, nakwa na ọ nọwo na-ese ya ma ya onwe ya amaghị. E ji ya mepụta ihe nkiri vidio, e rekwara ọtụtụ puku n’ime ha n’ụzọ megidere iwu.
Ihe ọzọ gbasawokwara ebe nile bụ izu ihe e ji amata mmadụ n’ohi, bụ́ omume nke iji nkà na ụzụ bụ́ ọkpọka ezuru ihe ndekọ zuru ezu banyere ndị mmadụ. Ọ bụ nnọọ ihe ezi uche dị na ya ichebe ihe ndị dịịrị nanị gị pụọ ná nnyocha nke ndị na-ekwesịghị ịma ya. * Bible na-ekwu, sị: “Onye nwere ezi uche ahụwo ihe ọjọọ, wee zobe onwe ya: ma ndị na-enweghị uche agabigawo, e wee rie ha nha.”—Ilu 22:3.
E Mee Ihe na Nzuzo—A Zaa Ajụjụ n’Ihu Ọha
Ka mpụ, ime ihe ike, na iyi ọha egwu na-arị elu, o yikarịrị ka gọọmenti dị iche iche hà ga na-enyochakwu ụmụ amaala ha. Otú ọ dị, n’oge na-adịghị anya, a gaghịzi enwe mkpa maka kamera ndị a na-eji eledo mmadụ na ihe ndị a na-eji ege nkwurịta okwu ndị mmadụ. Bible na-ekwe nkwa na n’ọdịnihu dị nso, ihe nile a kpọrọ mmadụ ga-aza ajụjụ n’ihu Jehova Chineke n’ihi ihe ndị ha mere, ma nke ha mere n’ihu ọha ma nke ha mere mgbe ha nọ nanị ha.—Job 34:21, 22.
Site n’oge ahụ gaa n’ihu, ime ihe ike, ịkpọasị, na mpụ bụ́ ndị mekpaworo ihe a kpọrọ mmadụ ahụ́ eri ogologo oge, agaghịzi adị n’elu ala. Olee otú nke a ga-esi kwe omume? Ọ bụ n’ihi na n’oge ahụ, ọ bụghị nanị na Jehova ga-amara ndị nile dị ndụ nke ọma, kamakwa, ndị nile dị ndụ ga-amara Jehova nke ọma. Okwu onye amụma bụ́ Aịzaịa ga-abụ eziokwu: “Ha agaghị eme ihe ọjọọ, ha agaghị ebibikwa, n’ugwu nsọ m nile: n’ihi na ihe ọmụma Jehova ga-ejupụta ụwa, dị ka mmiri si ekpuchi oké osimiri.”—Aịsaịa 11:9.
^ par. 21 Lee igbe bụ́ “Mara!”
Ịmara na ọ dịghị ihe ọ bụla a pụrụ izo ezo n’anya Chineke pụrụ ịkwali anyị ime ihe ndị ziri ezi
[Igbe/Foto dị na peeji nke 23]
IHE NDỊ DỊỊRỊ NANỊ ONWE ONYE NA EBE NDỊ A NA-ACHỌ ỌRỤ N’INTANET: Ndị na-achọ ọrụ bụ́ ndị na-edepụta iru eru ha n’Intanet na-eche ihe ize ndụ dị ukwuu ihu nke ịbụ ndị a gbara ihe ndị dịịrị nanị ha n’anwụ. A pụrụ idepụta iru eru mmadụ n’ebe a na-achọ ọrụ n’Intanet ruo ọtụtụ afọ, ọ pụkwara ọbụna ịghọ ebe ndị na-ezu ohi ihe e ji amata mmadụ ga-enweta ihe ọmụma. Ụfọdụ ebe a na-achọ ọrụ n’Intanet na-ekwu ka ndị na-achọ ọrụ depụta ihe ọmụma banyere onwe ha, ndị dị ka aha, adres, afọ ndụ, na ọrụ ndị ha rụtụworo, e mesịa ha ezigara ya ndị na-enyere ha aka achụ nta ọrụ, dị ka ndị na-akpọsa ngwá ahịa.
IHE NDỊ DỊỊRỊ NANỊ ONWE ONYE NA IJI FON A NA-EJI AGAGHARỊ AGAGHARỊ EKWURỊTA OKWU: Ka ọ dị ugbu a, e nweghị ụzọ na-adịghị oké ọnụ a pụrụ isi hụ na onye ọzọ egeghị ihe gị na mmadụ na-ekwurịta na fon na-enweghị eriri. Ọ bụrụ na unu na-akparịta ihe dịịrị nanị onwe unu, e nwere ike onye ọzọ agachaghị ama ma i jiri telifon nkịtị nke nwere eriri mee ihe. Jide n’aka na ma gị ma onye ị na-agwa okwu jicha fon nkịtị. Ihe ndị na-eme ka redio nweta ozi pụrụ ịdọrọ nkwurịta okwu a na-enwe n’ọtụtụ fon ndị na-enweghị eriri, ọbụna fon ndị ọzọ na-enweghị eriri ma ọ bụ ígwè ọrụ ndị e ji elekọta ọ̀tụ̀tụ̀ iku ume nwa a mụrụ ọhụrụ pụrụ ịdọrọ ya. Ọ bụrụ na ị zụọ ihe site na fon ma kwuo nọmba kaadị i ji azụrụ ihe n’aka na ụbọchị ọ ga-akwụsị ịdị irè, a pụrụ inyocha nkwurịta okwu ahụ i ji fon na-enweghị eriri mee, ị pụkwara ịghọ onye a ga-egwu wayo. *
^ par. 32 Ihe ọmụma e nwetara n’Ógbè Ndebe Ihe Ọmụma nke Privacy Rights Clearinghouse.
A dịghị ele nledo nke onye na-agụpụta onye mmiri na-eri anya dị ka inyoba anya n’ihe dịịrị onye ọzọ
[Foto ndị dị na peeji nke 22]
Ịmara na Chineke maara ihe ndị anyị na-eme kpaliri Doug ime mgbanwe ná ndụ ya
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Echiche Ziri Ezi Banyere Ihe Ndị Dịịrị Nanị Onwe Onye